Sarah Christiansen waxay ku biirtay McKnight bishii Janaayo 2021 sida Cimilada & Tamarta Midwest (MC&E) agaasimaha barnaamijka. Barnaamijka MC&E ujeedadiisu waa qaado tallaabo geesinimo leh dhibaatada cimilada adoo si aad ah u gooya wasakheynta kaarboonka ee bartamaha-galbeed 2030.
Iyadoo uu ku shaqeynayo wax ka badan 30 sano, Christiansen waa hogaamiye samafal xilliyeed u heellan sidii loo heli lahaa wadiiqooyin badan oo lagu gaarayo dhaqaale sinnaan iyo kaarboon dhexdhexaad ah. Waxay si dhow ula shaqaysaa xubnaha guddiga McKnight, hoggaamiyeyaasha sare, iyo kooxda MC&E si ay u adeegsadaan qalab kasta oo samafal ah oo la heli karo si loo yareeyo wasakhda kaarboonka ee gaadiidka, dhismayaasha, awoodda, iyo qaybaha beeraha.
Christien wuxuu khibrad u leeyahay xeelado badan oo cimilada ah, laga bilaabo qaababka ku saleysan meesha iyo xalka adduunka. Xusid ahaan, waxay u adeegtay sidii wakiilka maalgelinta Shirka Xisbiyada (COP), oo ah hay'adda ugu sareysa ee go'aan gaarista ee Qaramada Midoobay Qaabdhismeedka Isbedelka Cimilada. Doorkan, waxay si istiraatiiji ah u taageertay hoggaanka gudaha iyo dibedda COP iyada oo xireysa xalka aasaasiga ah ee cimilada u adkaysanaya xallinta qorshooyinka siyaasadeed ee magaalooyinka iyo dhulka miyiga ah.
Kahor intuusan ku biirin McKnight, Christiansen wuxuu maamule barnaamij kasoo noqday Solidago Foundation ee Massachusetts. Halkaas, waxay ku mideysay Sanduuqa Cimilada iyo Nadaafadda Tamarta Nadaafadda, oo taageerta ka-qaybgalka bulshada, kobcinta awoodda siyaasadda sinnaanta cimilada, iyo isbeddelka sheeko, waxayna dhistaa awoodda bulshada inta badan saameynta ku yeelatay isbeddelka cimilada. Laga soo bilaabo Virginia ilaa New Mexico ilaa Minnesota iyo wixii ka dambeeya, shaqada wada-hawlgalayaasheeda deeq-bixiyeyaasha ayaa horseeday guulo, ay ka mid yihiin u guurista heerarka tamarta la cusbooneysiin karo ee tamarta, kordhinta waxtarka tamarta ee dhismayaasha dowladda hoose, iyo maalgelinta kaabayaasha u adkaysan kara cimilada, iyo sidoo kale dhammaystir kale waxaa laga wareejiyaa siyaasad-dejiyeyaasha dowladda iyo hoggaamiyeyaasha ganacsiga si loogu beddelo nidaam tamar tamar nadiif ah.
Aqoonyahankii hore ee Fulbright ee Kameruun, Christiansen wuxuu MS ku haystaa horumar waara iyo bayoolaji dhowrista Jaamacadda Maryland iyo BS cilmiga deegaanka, horumarka, iyo dhaqanka Jaamacadda Minnesota.
Bayaanka McKnight ee ku saabsan Qaab-dhismeedka Waxqabadka Cimilada ee MPCA